Ferdinand: “Kulan saaxiibtinimo ayaa sabab u ahaa in Cristiano Ronaldo uu ku biiro Manchester United” – Gool FM
Ferdinand: “Kulan saaxiibtinimo ayaa sabab u ahaa in Cristiano Ronaldo uu ku biiro Manchester United”
(Man United) 26 Maajo 2018. Difaacii hore kooxda Manchester United Rio Ferdinand ayaa wuxuu ka warbixiyay waxay u sheegeen Sir Alex Ferguson ciyaartoyda kooxda Red Devils kahor inta uusan sameenin saxiixiisa Cristiano Ronaldo.
Rio Ferdinand ayaa wuxuu u sheegay wargeyska “The Sun” ee dalka England “Waxa ay u caddaatay qof walba inuu noqon doono xiddig weyn oo mustaqbal yeelan kara”.
“Wuxuu ahaa 18 jir kulankii uu Ronaldo si fiican u ciyaaray ee ka tirsanaa kulamada saaxiibtinimo ee diyaar garowga ee kahoreeya xili ciyaareedka, waxaan la ciyaarnay Sporting Lisbon uu ka tirsanaa waxayna nooga adkaadeen 3-1”.
“kadib waxaan ku sugneen baska ay saarnaayeen madaxa fulinta kooxda David Gill iyo Sir Alex Ferguson, kaliya waxaan ka dooneenay iyaga saxiixa Ronaldo, isbuuc gudihiis wuxuu qeyb nagala soo noqday tababarka”.
Ronaldo ayaa u wareegay Manchester United sanadii 2003-dii, wuxuuna ku sugnaa Red Devils ilaa uu kaga biiray Real Madrid xagaagii 2009.
Luis Suarez oo ka war helay labo saxiix oo ay samaynayso Barcelona suuqa xaggaagan
Vicente del Bosque oo saadaashiisa ka dhiibtay natiijada kulanka caawa